Tor Browser Bundle 3.0 RC 1 -Portable (Only users from Myanmar) - .::just for share::.
Home » Browser » Tor Browser Bundle 3.0 RC 1 -Portable (Only users from Myanmar)
Tor Browser Bundle 3.0 RC 1 -Portable (Only users from Myanmar)
ဒီပိုစ့် ကလေးကို ရေးလိုက်တာက မြန်မာက အင်တာနက်သုံးသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ် .. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာတွေ ရှိပေမယ့် အကျော်အခွ ကလေးတော့နည်းနည်းလုပ်ရပါတယ် ..
အဲဒီ့ အခက်အခဲလေးများ ပြေပျောက်စေအောင်ပါ . အမှန်တော့ အခု အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ လေ့လာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပါပဲ .. မည်သူတွေပဲ ပိတ်ထားထား ရအောင်ဝင်တဲ့ နည်းလမ်း ကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ ... အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကောင်းတဲ့ စာမျက်နှာတွေ ရှိသလို .. မကောင်းတဲ့ စာမျက်နှာတွေ .. လူတွေ ကို အာရုံများစေတဲ့ စာမျက်နှာတွေ .. အစုံပါပဲ .. စုံတာမှ တော်တော့် ကိုစုံတာပါ ... ဒါကြောင့် လေ့လာချင်တဲ့သူများ အဆင်ပြေအောင်လို့ ဒါကလေးကို လမ်းညွှန်လိုက်တာပါ .. ကျွန်တော့် ထက် အရင် သိပြီးတဲ့သူတွေ လည်းရှိမှာပါ ... ကျွန်တော်လည်း မနေ့ညက မှ ကျွန်တော့် အကို က လမ်းညွှန်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက မသိတဲ့သူတွေများ သိပါစေ ဆိုပြီး ပြန်ပြီးတော့ Share လိုက်တဲ့ သဘောပါခင်ဗျာ .. စိုးတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ် .. ဒါကလေး တင်ပြီးမှ ဒါကိုပါ ပိတ်သွားမှာကိုပါ .. ဘာမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. ကျွန်တော် အနေနဲ့ကတော့ အင်တာနက်မှာ လာသုံးတာချင်းအတူတူ တော့ ရတဲ့အ ချိန်လေးမှာ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ပါစေ လို့ပဲ ပြောပါရစေ ...
ကဲ စကားတွေ ရှည်သွားပြီဗျ ..အခု ကျွန်တော် ပြောမယ့် ဟာက အကျော်အခွ အတွက် အထူးကောင်းတဲ့ အရာလို့ ပဲ ပြောပါရစေ ...